Maamulaha Shirkada caanka ah ee Canada Valve Company Booqo Warshadda Titan Madax ee Ball Valve iyo Waxsoosaarka Gate Valve-Company News-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve waa sumadeena)
Maamulaha Shirkada Caanka ee Canada Valve ayaa booqatay Warshadda Titan Valve for Ball Valve iyo Gate Valve Production
Waqtiga: 2020-10-09 Hits: 64
Dhawaan Maamulaha shirkadda caanka ah ee Canada Valve iyo shaqaalihiisu waxay booqdeen warshad Titan Valve ah oo loogu talagalay waalka kubbadda iyo soo saarida amarka waalka.
Titan Valve waxay bixisaa waalka kubbada iyo waalka albaabka OEM ee loogu talagalay Suuqa Waqooyiga Ameerika in ka badan toban sano. Markan waxaan u soo bandhigeynaa macaamiisha hal xabbo oo 2000psi NPT ah oo xarig ah oo lagu dhejinayo walxaha lebbiska ah. Dhamaan tijaabada bawdada iyo kormeerida API 598 labadaba tijaabada biyaha iyo tijaabada hawada. Waalka Titan had iyo jeer codso 100% imtixaan si amar kasta iyo waalka. Ka sokow, kubad kasta oo bawlo ah oo tijaabo ah oo isku xira dunta qalab gaar ah si loo hubiyo isku xirnaanta oo sax ah oo siman.
Wadashaqeynteenu waxay ka bilaabaneysaa 2006 oo waxaan sii wadnaa xiriirkan dhow sanado badan macaamiilkuna wuxuu ku qanacsan yahay alaabada iyo adeegga Titan valve. Si loo xoojiyo kalsoonida isticmaaleyaasha dhamaadka iyo tiknoolajiyada titan-ka waxaa caddeeya SGS alaabta ceeriin ee alaabta guryaha farsamo adag gaar ahaaneed oo ay tahay inay la kulmaan heerka ASTM A105 iyo NACE MR0175.
Titan Valve ayaa hayn doonta tayo sare waxayna sii wadi doontaa inay bixiso waalka kubbada aduunka iyo waalka albaabka ee suuqa aduunka.
Hore: Macaamiisha Bariga Dhexe waxay booqdaan warshadda Titan Valve kormeerka waalka ee mashruuca Saliida iyo Gaaska ee Ciraaq